Ecommerce dị iche iche dị adị ma ị nwere ike itinye akwụkwọ | ECommerce ozi ọma
Comdị Ecommerce dị iche iche dị adị ma ị nwere ike itinye akwụkwọ
Susana Maria Urbano Mateos | | Ụzọ ịkwụ ụgwọ
You maara nke ahụ ụdị nke nyiwe e-commerce enwere ike ịkọwa ha dịka usoro ikikere gị, ọnọdụ ahịa na mgbanwe data? Ọ ga-amasị gị ịmatakwu nkọwa? Mara nke ụdị Ecommerce dị iche iche nke dị n'okpuru.
1 E-azụmahịa na ogige
2 Ecommerce software dị ka ọrụ (SaaS)
3 Ecommerce na-emeghe
E-azụmahịa na ogige
Este ụdị sọftụwia ecommerce chọrọ mbido ego nke otu ịzụrụ, dị ka iwu izugbe. Onye ahịa ahụ ga-etinyekwa ego na ọrụ ngwaike na nrụnye. Mana nke ahụ abụghị ihe niile, ịkwaga data na mmezi na-aga n'ihu kwesịrị ịtụle, yana ụgwọ kwa afọ maka mmelite ngwanrọ na nkwado.
Ecommerce software dị ka ọrụ (SaaS)
Saas bụ usoro nnyefe nke igwe ojii, ebe a na-akwado ngwa ọ bụla ma jikwaa ya na data data nke onye na-eweta ọrụ. A na-akwụ ụgwọ site na ndenye aha. Shopify na Nchọgharị Ihe omuma atu abuo abuo nke ihe omuma e-commerce nke Saas. N'adịghị ka ecommerce nkịtị, SaaS dị oke ọnụ, kwadoro ma melite site na ndị na-eweta ecommerce, ma nwee ike ịbawanye ngwa ngwa. N'ihi ya, ijikọ ya na sistemụ nwere oke; enweghị nchekwa data ma ghara inye njikwa zuru ezu na sistemụ.
Onye ọ bụla na-emepụta mara na Open Source Ecommerce bụ ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere ịwụnye, dozie, chebe ma hazie el software na gị onwe gị na sava Iji melite ikpo okwu na-emeghe, ị ga-achọ ihe ọmụma dị mkpa na ntanetị na ntanetị na mmepe. Enwere ike ịnweta ma gbanwee koodu iyi nke ngwaahịa ngwanrọ akpọrọ dị ka ihe mepere emepe.
Isi emeghe ecommerce uru bụ na ọ bụ n'efu; enwere ụdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche iji nwekwuo arụmọrụ ya, gbakwunyere na ọ na-enye mgbanwe ka mma na koodu isi mmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Comdị Ecommerce dị iche iche dị adị ma ị nwere ike itinye akwụkwọ
Ihe ndi mba ọzọ rere na saịtị Ecommerce
5 ppingzụta Szụ ahịa Nchịkọta Ecommerce zuru oke maka 2016